Soo dejisan MEGAsync 4.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: MEGAsync
MEGAsync – software ah in ay waafajinta xogta la kaydinta daruur oo caan ah. software The isku mar iyo xad la’aan ah tiro awood, si ay u soo dejisan ama geliyaan faylasha of qaabab kala duwan iyo fayl ee tirada badan. MEGAsync synchronizes files u dhexeeya computer ah, qalabka Android iyo macruufka iyo kaydinta daruur qaraniga ahee ee. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto qadarka meel disk used, reserved fursadaha .Wadashaqayntaas iyo xaddido xawaaraha Upload ah. MEGAsync siisaa ilaalinta lagu kalsoonaan karo of files, oo waxaa lagu gaarayaa iyada oo sirta xogta.
.Wadashaqayntaas Data dhexeeya aad PC iyo kaydinta a
Degsado iyo koombiyuutarka ee fayl badan oo isku mar
Galitaanka meel disk ah
Soo dejisan MEGAsync
Faallo ku saabsan MEGAsync
MEGAsync Xirfadaha la xiriira
The set ee software tayada horumarinta web iyo rakibidda dhamaystiran web server ah. Software waxaa ka mid ah Apache server web, database MySQL iyo PHP script turjubaan.